Mandrosoa ny desertification any Espana isan'andro | Fanavaozana maintso
Rehefa miresaka momba ny fanalananana na fanesorana tany efitra isika, maro na mihoatra ny olona no mahatakatra izay tiana holazaina. Saingy, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ireo hevitra roa ireo. Rehefa miresaka momba ny tany efitra isika dia miresaka momba ny fahaverezan'ny tany mahavokatra nateraky ny natiora, izany hoe tamin'ny famafana ny rivotra sy ny orana tamin'ny fomba voajanahary.
Etsy ankilany, raha miresaka ny hevitra momba ny fanesorana tany efitra isika dia milaza fa ny fahaverezan'ny tany mahavokatra dia vokatry ny famafana ny rivotra sy ny orana any amin'ny toerana sasany izay novain'ny olona ka, noho izany, dia iharan'ny fahavoazana fa tsy voajanahary izany. Any Espana, ny tsy fahaiza-mandamina sy ny fandrindrana ny habaka dia mitarika ny fandosirana amin'ny fomba mahatsiravina. Fa inona ity?
1 Desertification any Espana
2 Ecosystems izay voakasik'izany
3 Ahoana no ahitantsika fa mijaly toerana ny toerana iray
Desertification any Espana
Ny desertification any Espana dia mitombo isan'andro noho ny tsy fahombiazan'ny drafitra sy ny drafitra an-tanàn-dehibe. Fanararaotana be loatra ny harena voajanahary toy ny rano amin'ny toerana sasany izay tsy mahazaka haintany na tsy fahampian'ny hamandoana, dia miteraka fiakaran'ny hetsiky ny rivotra sy ny orana amin'ny tany. Ny fahaverezan'ny zavamaniry no famantarana voalohany ny tany amin'ny zana-tany efitra. Raha tsy manana fonony zavamaniry hiarovana azy ny tany dia sarona tanteraka izy ary mora tohina amin'ny fihetsiky ny rivotra.
Misy olona diso hevitra tany an'efitra. Na izany aza, ny fahasamihafana dia mazava sy marina. Ny tany efitra dia tontolo iainana voajanahary izay niforona tao anatin'ny toe-tany maina be. Mifanohitra amin'izany no izy, ny fanafoanana ny zana-tany dia dingana iray atolotry ny asan'ny olombelona amin'ny ekosistia voajanahary ary tsy ampy ny fanelanelanan'izy ireo, ka niteraka ny famotehana ny fandanjana ny tontolo iainana sy ny famokarana voalohany. Ny olombelona dia manararaotra loatra ny harena voajanahary amin'ny fomba tsy dia kasaina loatra, noho izany miaina ny vokany ny tontolo iainana.
Misy fahasamihafana mazava tokoa fa ny tany efitra, na dia toa tsy misy toa izany aza, dia manan-karena biodiversité noho ny toetr'andro miovaova eo anelanelan'ny alina sy ny andro ary ny fahasamihafana eo amin'ny hamandoana misy eo amin'ny toerana manaloka sy ny masoandro. Misy karazam-biby, zavamaniry ary zavamiaina bitika afaka mahazaka izany toe-javatra izany, na izany aza, manimba ireo tany manankarena kokoa ny famaritana ala ary mahatonga azy ireo ho tsy dia azo afindra intsony.
Ecosystems izay voakasik'izany
Araka ny angon-drakitra Fandaharana nasionaly momba ny hetsika fanoherana ny Desertification (PAND) an'ny minisiteran'ny Fambolena sy ny jono, ny sakafo ary ny tontolo iainana (Mapama), maherin'ny roa ampahatelon'ny tontolon'i Espana no mora tratran'ny tany efitra. Ny iray amin'ireo toerana mora ihodinana dia ny faritra voankazo sy legioma amoron-dranomasina izay miteraka fitrandrahana tafahoatra ny rano anaty rano ao amin'ny faritry ny trano fiompiana Granada, Almería, Murcia ary ny Nosy Canary.
Ny ekosistra hafa simba noho ny fanalavirana ny tany ambanivohitra sy ny faritra karakaina dia nilaozana ary tsy voatsabo tsara. Ny fifindra-monina ambanivohitra mankamin'ny tanàna lehibe dia miteraka fanaovana ambanin-javatra ny ambanivohitra sy ny fikojakojana ratsy azy ireo. Io tsy fifehezana ny tany io dia mamela ireo faritra tena marefo amin'ny doro ala. Ireo faritra ireo dia misy manerana an'i Espana ary ny afo dia lehibe indrindra amin'ny fahavaratra.
Ny ekosistia hafa voakasik'izany dia ny fambolena hazo, indrindra ny fambolena oliva sy amygdala ao amin'ny fantsakan'i Guadalquivir, izay manamaina ny rano anaty rano sy manimba ny fonon'ny zava-maniry koa; ny kijana; ary faritra hafa misy fatratra ao anaty voly hafa.
Ahoana no ahitantsika fa mijaly toerana ny toerana iray
Ny famantarana miharihary indrindra izay ampiavaka antsika ny fisehoan'ny desira amin'ny faritra iray dia ny crust sy gullies amin'ny tany. Ny olana amin'ity tondro ity dia ny tara, izany hoe, rehefa miseho, ilay aquifer ambanin'ny tany dia efa niaritra fahafatesana tsy azo ivalozana.
Ireo karazana fivelozana dimy izay mandroso any Espana dia tsy maintsy atao ifotony amin'ny drafitry ny fambolena mahantra - eken'ny manam-pahaizana izany - na noho ny fandaozana ny tany na ny fampiasana be loatra azy io izay mitady tombom-barotra amin'ny vola lany rehetra ary mampiasa tafahoatra ny rano anaty rano mba hanondrahana. Izany dia mitranga toy ny amin'ny ranomasina sy ny fanjonoana tafahoatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Mandroso isan'andro ny desertitra any Espana